Ihe nzuzo 7 gbasara Pokémon Go nke ị ghaghi ima Akụkọ akụrụngwa
Pokémon Go, Egwuregwu ọhụrụ nke Nintendo maka ngwaọrụ mkpanaka, na-aga n'ihu na-abụ nnukwu onye mgba ugbu a, ọ bụghị naanị na ụwa nke teknụzụ na egwuregwu vidio, mana o jisiri ike zoo n'ime ihu akwụkwọ akụkọ n'ihu ụwa niile na ụfọdụ akụkọ akụkọ kachasị mkpa. telivishọn. Ọtụtụ ndị na-azụ ọzụzụ dị njikere ịchụ nta Pokémon niile dị. Nọmba a na-aba ụba na ọ bụ na awa ikpeazụ na egwuregwu a na-enweta na mba ọhụrụ.
Anyị ka nwere ọtụtụ ihe iji chọpụta banyere egwuregwu ahụ na ọtụtụ n'ime anyị ndị malitere ịnụ ụtọ Pokémon Go kwa ụbọchị na-eche ọtụtụ Pokémon dị na egwuregwu ahụ, mmadụ ole anyị nwere ike ijide ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị mfe ịchụ nta ha niile. Iji dozie obi abụọ ndị a na ndị ọzọ, taa anyị kpebiri ịgwa gị n'isiokwu a Ihe nzuzo 7 gbasara Pokémon Go nke ị maghị.
Ọ bụrụ na ịnwere ụtọ Pokémon Go, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eche mgbe ị na-ebibi mbọ gị maka mbata nke egwuregwu Nintendo na Google Play ma ọ bụ Storelọ Ahịa App nke mba gị, ọ gaghị adị njọ ka ị gụọ ma mara ihe nzuzo ndị a banyere Egwuregwu na nchekwa zuru oke ha ga - enyere gị aka ịbụ ezigbo nchịkwa.
1 Na Pokémon Go enwere 151 dị iche iche Pokémon
2 Enweghị naanị otu ụdị Pokémon
3 Pokémon nwere "ọdịdị"
4 Ndị a bụ ọdịdị nke Pokémon
5 Typesdị Pokémon niile dị na egwuregwu ahụ
6 Pokémon Go nwere ihe 232, 95 n'ime ha na-ebu ọnụ
7 N’oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ ebe ndị akwadoro
Na Pokémon Go enwere 151 dị iche iche Pokémon
Ọnụ ọgụgụ nke Pokémon anyị nwere ike ịchụ nta ugbu a na Pokémon Go ruru 151, nke bụ ndị niile dị na egwuregwu mbụ nke saga a, nke ahụ bụ ịsị na akụkọ ama ama Red / Blue Pokémon. E mekwara egwuregwu ndị a baptizim dị ka Gen I, ọ bụ ezie na naanị ndị ọkachamara maara aha nomenclature a na Pokémon saga.
N'ime 151 Pokémon ndị a niile ka ọtụtụ ndị maara, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị geghị egwuri egwu kemgbe ọtụtụ afọ. Pickachu, Charmander ma ọ bụ Bulbasaur, atọ n'ime Pokémon a kacha mara amara bụ ụfọdụ n'ime ndị anyị nwere ike ichu nta ma tinye n'ime Pokédex anyị.
Lee, anyị gosiri gị ndepụta zuru oke nke Pokémon niile anyị nwere ike ịchọta na Pokémon Go;
Onye na-akpọ Graveler
Enweghị naanị otu ụdị Pokémon
Ọ bụrụ n’ịkpọ Pokémon Go obere oge ma ọ bụ karịa, ị ga-achọpụta na ijide Pokémon mbụ bụ ihe dị mfe, mana ọ naghị adị mfe ijide ha niile, ọbụlagodi ụfọdụ n’ime ha agaghị ekwe omume maka ọtụtụ ndị egwuregwu ijide.
Ma ọ bụ ya E kewara Pokémon ka ọ bụrụ nke nkịtị, nke akụkọ mgbe ochie na akụkọ ifo, n'otu ụzọ ahụ dị ka egwuregwu. Nke a kọwara n'ụzọ dị mfe bụ na Pokémon nkịtị ga-adị mfe ma ọ bụ obere mfe ịhụ ma jide, mana ndị nkewa dịka akụkọ ifo na akụkọ ifo, ga-adị mgbagwoju anya.
Dị ka ụfọdụ asịrị Pokémon Legend nwere ike ịnwe ike ijide naanị na mmemme pụrụ iche. Tụkwasị na nke a, a nụkwara na otu n'ime ha nwere ike zoo n'elu Everest, ọ bụ ezie na Nintendo ekwenyeghị ozi ọ bụla gbasara kpọmkwem ọnọdụ ụfọdụ n'ime ndị o kere eke n'oge a.
Pokémon nwere "ọdịdị"
Otu n'ime ihe ndị ị na-amaghị na nke ahụ bụ Pokémon niile na-apụta na egwuregwu ahụ nwere ọdịdị, nke akọwapụtara ụdị mmadụ ha. Ndị mmadụ a dị iche iche na-emetụta ụzọ ị na-awakpo ma ọ bụ na-agbachitere, nke ọma na nke na-adịghị mma na nwekwara ike imetụta mpaghara ndị ọzọ.
O di nwute na anyi agaghi enwe ike ichoputa udiri nke Pokémon obula, ma obu megharia ya n’uzo obula, ya mere o gha adi nkpa ka ichota ihe ndi ozo ka nma, ka inwere ike imegide onye iro ya na Pokémon ozo. .
Ndị a bụ ọdịdị nke Pokémon
Dika anyi gwara gi Pokémon nwere ọdịdị dị iche iche, nke bụ ngụkọta nke 7 na nke anyị ga-egosi gị n'okpuru;
"Guardian" (Onye nche)
"Ogbu mmadu" (O gburu)
"Onye nchebe" (Onye nchebe)
"Onye mmeri" (Onye mmeri)
Typesdị Pokémon niile dị na egwuregwu ahụ
Na Pokémpn Go, dịka anyị kwurula, anyị nwere ike ịhụ ma chụọ ngụkọta nke 151 Pokémon, nke bụ ndị nọ na egwuregwu mbụ. Otú ọ dị, ọ dị ka Nintendo nwere ọtụtụ kaadị echekwara aka uwe ya na ọ bụ na data egwuregwu Enweelarịrị ozi na Pokémon nke pụtara n'egwuregwu ndị ọzọ dị ka Fairy, Ọchịchịrị ma ọ bụ Nchara.
Nke a pụtara na ụlọ ọrụ ndị Japan ga-ebupụta mmelite n'ọdịnihu nke ọ ga-ewebata Pokémon ọhụrụ. N'oge ahụ Nintendo na-enye anyị ohere ịchụ nta 151 e kere eke, mana anyị na-atụ egwu na mgbe anyị nwere ha niile, anyị ga-enwe ozi ọhụụ, nke ga-abụ ịchụ nta ihe mgbakwunye ọhụrụ nke ga-abata n'ụdị nwelite maka egwuregwu.
Pokémon Go nwere ihe 232, 95 n'ime ha na-ebu ọnụ
Maka oge ahụ na Pokémon Go anyị na-ahụ mmegharị 232 maka Pokémon, nke 95 n'ime ha na-ebu ọnụ. Otú ọ dị, ọzọ, nyochaa data dị n'ime egwuregwu ahụ anyị nwere ike ịhụ mmegharị nke nsụgharị nke saga mgbe nke mbụ gasịrị, nke Pokémon niile nwere.
N'oge a anyị nwere ike iji Pokémon anyị mee ọtụtụ mmegharị, mana site na mmelite ndị ọhụrụ anyị nwere ike ịkwaga karịa.
N’oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ ebe ndị akwadoro
Pokémon Go bụ ezigbo ihe ịga nke ọma nke nwere ọtụtụ narị puku ndị egwuregwu gburugburu ụwa na nke Nintendo nwere ike ịmalite iji ya nweta uru akụ na ụba. nkwado nke ọnọdụ. Ma ọ bụ na dịka amaara ya na enwere ike ikwenye na egwuregwu egwuregwu Poképaradas na anyị niile ga-agagharị ịchọ ihe na ozi, nwere ike bụrụ saịtị mgbasa ozi n'oge na-adịghị anya.
Ugbu a, anyị ga-echere iji hụ ụlọ ọrụ ndị na-ekpebi ịkpọsa site na Pokémon Go na ihe ịga nke ọma ya.
You chọpụtala ihe nzuzo niile dị ebe Ppokémon Go na nke anyị gwara gị taa site na isiokwu a?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe nzuzo 7 gbasara Pokémon Go nke ị maghị
BQ Aquaris X5 Plus ga-aga ahịa na July 28